Manchester City oo u muuqata inay kooxaha Manchester United iyo Barcelona ku garaacday saxiixa Ronaldo Camara – Gool FM
(Manchester) 22 Maarso 2019. Kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa la soo warinayaa inay u muuqato inay ku guuleysatay tartanka loogu jiro saxiixa xiddiga naadiga Benfica ee Ronaldo Camara.
Tiro ka mid ah kooxaha waa weyn ee adduunka ayaa la la xiriirinayey xiddigan 16-sano jirka ah, Kooxaha Manchester United iyo Barcelona ayaana la fahamsanaa inay kormeer ku haayeen laacibkan oo ay doonayeen inay la soo wareegaan.
Man United ayaa rajeynaysay inay heshiis cusub ka saxiixato da’yarkan bisha Janaayo marka uu furmo suuqa kala iibsiga xiddigaha, laakiin Wargeyska Evening Standard ayaa soo warinaya inay haatan wajahayaan dagaal xooggan oo ku aaddan saxiixiisa.
Man City ayaa kalsooni ku qabta in ku soo biiritaan akadeemiyadooda casriga ah iyo la shaqeynta tababarahooda Pep Guardiola ay ku qancin karto in Camara ay ka dhaadhiciyaan inuu ka doorbido Man United ama Barcelona.
Xiddigaha Jadon Sancho, Brahim Diaz iyo Phil Foden ayaa ka soo aflaxay akadeemiga kooxda Man City sanadihii dhowaa, Camara ayaana qaadan kara go’aan kale oo uu ugu biirayo akadeemiga City.
Camara ayaa aad looga qiimeeyaa kubadda cagta, isagoo ku riyaaqaya inuu u ciyaaro kooxda Benfica iyo xulka Portugal oo da’doodu ka yar tahay 17-jirrada, waxaana uu kulankiisii ugu horreeyey saftay isagoo kaliya jira 14-sano.